मोटरसाइकल बेच्दा ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने सरकारी तयारी, 'ठग'हरुको 'सेटीङ' प्रयास जारी !
ARCHIVE, COVER STORY, SPECIAL » मोटरसाइकल बेच्दा ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने सरकारी तयारी, 'ठग'हरुको 'सेटीङ' प्रयास जारी !
काठमाडौँ- मोटर साइकल बेच्दा गैरकानुनी रुपमा नाफा कमाएर जनताको पसीना चुस्न पल्किएका केहि ठगहरुलाई सरकारले कारवाही गर्ने तयारी गरिरहेको खबर प्राप्त भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मोटरसाइकल बेच्दा लुटधन्दा मच्चाउने, नेपालको प्रचलित ऐन विपरित नाफा खाने, मनपरी ढंगले आफैं मूल्य तोक्ने र जनतालाई ठग्ने 'माफिया'हरु विरुद्ध कारवाहीको तयारी गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार सरकारले खरिद र विक्री मूल्य हेरर ठगहरुलाई नियन्त्रणमा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । ‘मोटरसाइकल कतिमा बिक्री भइरहेको छ र त्यो मोटरसाइकलको प्रज्ञापनपत्रमा कति खरिद देखिएको छ, त्यो हेरेर हामी कारबाही गर्छौै । मोटरसाइकल बेच्ने कम्पनीहरुले धेरै जनता लुटे भन्ने व्यापक जनागुनासो आएको छ । कतिपय त कम्पनीका नाम नै किटेर समेत उजुरी परेका छन् ।' उनले भने । यसरी जनता लुट्ने ठगहरुमा बजाजका मालिक शेखर गोल्छा, होन्डाका मालिक शौरभ ज्योति, यामाहाका विष्णु अग्रवाललगायत छन् । यी ठगहरुले राजनीतिक आडमा रहेर देशको कानुनको धज्जी उडाउँदै जनताको पसीना चुस्ने गरेका छन् ।
खरिद मूल्य र विक्री मूल्यको तुलना गर्दा गोल्छा कम्पनीले एउटै मोटरसाइकलबाट ७६ हजार नाफा लिने गरेको छ । नेपालको प्रचलित ऐन अनुसार २०% भन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने भएपनि कम्पनीले एउटा मोटरसाइकलमा ७८००० बढी नाफा राख्ने गरेको छ । यस्तै जनता लुटेर खान पल्किएको यामाहाको रे–जेडआर डिस्क मोटरसाइकलमा बिक्रेताले उपभोक्ताबाट ६२ दशमलव ९७ प्रतिशत नाफा लिने गरेका छन् ।
तर यसरी जनताको मेहेनतलाइ मारेर देशको कानुनमाथि नै धावा बोल्दै जनताको पसीना लुट्नेहरुलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । यद्यपी यसमा पनि सेटीङ नै गरेर नै ठग व्यापारीहरु आफ्नो कर्तुत लुकाउन लागि परेको शंकासमेत अधिकांस सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
'छोरोले बाउ बिर्सिने भो ! छोरी बाउ बिना बिग्रिने भइ ! त्यसैले, अहँ म अब बैंकर बन्दिन बा... ! (बैंकिङ कविता)
गाडीमा सरर गुड्ने तपाईंको चाहाना पूरा गर्दैछ मेगा बैंक, महिनाको १५ हजार किस्ता बुझाए पुग्ने !
Breaking : धेरैपछि नेपालमा पुन : गयो भूकम्प !
निकै गाह्रो मानिने सिएको परिक्षामा अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोडेपछि टपरहरुको यो हाँसो... यो उमङ्ग...! (फोटो कथा)
कमलपोखरीमा गुडीरहेको ''माज्दा' कम्पनीको गाडी एक्कासी पड्कियो, मानिसहरुको भागाभाग (फोटोफिचरसहित)
भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले २ करोड ७० लाखको प्राडो ल्याण्डक्रुजर गाडी चढ्ने !
फरक कोण : डाक्टर गोबिन्द केसीको अनुशासन यहि हो ? प्रधानमन्त्रीका अगाडी बस्ने 'पोज' यस्तै हुनुपर्ने हो ?
युद्धबाट 'हिरो' भएका नेताहरुलाई कहाँबाटसम्म आउँछ करोडौं पैसा ? सीपी गजुरेलले खोले यस्तो रहस्य ! (भिडियो)
सिक्री लुछ्ने ग्याङ ! जानीराखौं यस्तो हुन्छ चोरको टेक्निक ! यसरी सकिन्छ बच्न